गोपनीयता कानून, गोपनीयता अधिकारहरूको संरक्षण
गोपनीयता एक मौलिक अधिकार हो र दुबै व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई तिनीहरूको डाटा नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। युरोपेली र राष्ट्रिय कानून र नियममा भएको वृद्धि र सुपरभाइजरहरूको अनुपालनमा कडा नियन्त्रणका कारण कम्पनीहरू र संस्थाहरूले आजका दिन ब्यलै गोपनीयता कानूनलाई बेवास्ता गर्न सक्दछन्। कानून र नियमको सबैभन्दा प्रख्यात उदाहरण जुन लगभग सबै कम्पनी वा संस्थाले पालना गर्नुपर्दछ सामान्य डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेसन (GDPR) हो…
रोजगारदाताको आवश्यकता छ?
गोपनीयता एक मौलिक अधिकार हो र दुबै व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई तिनीहरूको डाटा नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ।
> अनुप्रयोग दायरा र पर्यवेक्षण
> इन्भेन्टरी र गोपनीयता नीति
> सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर)
युरोपेली र राष्ट्रिय कानून र नियममा भएको वृद्धि र सुपरभाइजरहरूको अनुपालनमा कडा नियन्त्रणका कारण कम्पनीहरू र संस्थाहरूले आजका दिन ब्यलै गोपनीयता कानूनलाई बेवास्ता गर्न सक्दछन्। कानून र नियमको सबैभन्दा प्रख्यात उदाहरण जुन लगभग सबै कम्पनी वा संस्थाले पालना गर्नै पर्दछ सामान्य डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेसन (जीडीपीआर) जुन यूरोपियन युनियनभर लागू भयो। नेदरल्याण्ड्समा, GDPR कार्यान्वयन ऐन (UAVG) मा थप नियमहरू राखिएको छ। जीडीपीआर र युएभीजीको मुख्य तथ्य यो छ कि प्रत्येक कम्पनी वा संस्थाले व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गर्ने यी व्यक्तिगत डाटा होशियारी र पारदर्शी रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्दछ।
जे होस् तपाईको कम्पनी GDPR- प्रमाण बनाउने धेरै महत्वपूर्ण छ, यो कानूनी रूपमा जटिल छ। चाहे यसले ग्राहक डेटा, कार्मिक डाटा वा तेस्रो पक्षहरूको डेटा सम्बन्धित छ, जीडीपीआरले व्यक्तिगत डाटाको प्रसंस्करणको सन्दर्भमा सख्त आवश्यकताहरू सेट गर्दछ र व्यक्तिको अधिकारहरू पनि सुदृढ गर्दछ जसको डाटा प्रशोधन गरिएको छ। Law & More वकिलहरू गोपनीयता कानून सम्बन्धी सबै परिवर्तनहरूको बारेमा सचेत छन्। हाम्रो वकिलहरू तपाईको व्यक्तिगत डेटा ह्यान्डल गर्ने तरिकामा भित्र पस्छन् र आन्तरिक प्रक्रियाहरू र डाटा प्रोसेसिंगको नक्शा बनाउँदछन्। हाम्रो वकिलहरूले यो पनि जाँच्दछन् कि कुन हदसम्म तपाईंको कम्पनी पर्याप्त एजीजी कानून अनुसार सम्भावित संरचनामा छ र सम्भावित सुधारहरू के हुन्। यी तरिकाहरूमा, Law & More तपाइँलाई आफ्नो संगठन GDPR- प्रमाण बनाउन र मद्दत गर्न खुशी छ।
AVG को परिचयसँगै, कानूनहरू कडा गरियो। के तपाईंको कम्पनी यसका लागि तयार छ?
डाटा संरक्षण अधिकारी
हामी तपाईंलाई डेटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त गर्न मद्दत गर्दछौं
डाटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन
हामी तपाईको डेटा प्रसंस्करण संग सम्बन्धित जोखिम पहिचान गर्न एक विश्लेषण गर्न सक्छौं
डाटाको प्रशोधन गर्दै
तपाईंको कम्पनीले कुन डाटा प्रक्रिया गर्दछ? यसले औसतमा प्रक्रिया गर्दैछ? हामी तपाईंको सेवामा छौं
“परिचयको बेला यो
तुरुन्तै मेरो लागि स्पष्ट भयो
कि Law & More छ
कार्यको स्पष्ट योजना "
अनुप्रयोग दायरा र पर्यवेक्षण
GDPR सबै संगठनहरूमा लागू हुन्छ जुन व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ। जब तपाईंको कम्पनीले डाटा सlects्कलन गर्दछ जससँग एक व्यक्ति पहिचान गर्न सकिन्छ, तपाईंको कम्पनीले GDPR सँग गर्‍यो। यसबाहेक, व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गरिन्छ जब, उदाहरणका लागि, तपाईंको कर्मचारीहरूको तलब प्रशासन राखिन्छ, ग्राहकहरूसँग नियुक्ति दर्ता हुन्छन् वा जब स्वास्थ्य सेवामा डाटा साटासाट गरिन्छ। तपाईं निम्न अवस्थाहरूको बारे पनि सोच्न सक्नुहुन्छ: मार्केटिंग गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने वा मापन गर्ने वा कर्मचारी उत्पादकत्व वा कम्प्युटर प्रयोग रेजिस्टर गर्ने। माथिको अवलोकनमा, यो अपरिहार्य छ कि तपाईंको कम्पनीले गोपनीयता कानूनसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
नेदरल्याण्ड्समा आधारभूत सिद्धान्त भनेको यो हो कि कम्पनी र संस्थामा उनीहरूको डेटा हेरचाह गर्नका लागि भर पर्नु पर्छ। आखिर, हाम्रो वर्तमान समाजमा, डिजिटलीकरणले बढ्दो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र डिजिटल फाराममा डाटा प्रोसेसिंग समावेश गर्दछ। यसले हाम्रो गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्नको सन्दर्भमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण डच गोपनीयता पर्यवेक्षक, डच डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (एपी) का दूरगामी नियन्त्रण र प्रवर्तन शक्तिहरू छन्। यदि तपाईंको कम्पनीले लागू GDPR कानूनको पालना गरेन भने, यसले छिटो समय आवधिक दंड भुक्तान वा पर्याप्त जरिवानाको बिषयमा जोखिम लिन सक्छ, जुन बीस मिलियन यूरो सम्ममा हुन सक्छ। थप रूपमा, व्यक्तिगत डाटाको लापरवाह प्रयोगको घटनामा, तपाईंको कम्पनीले सम्भावित खराब प्रचार र पीडितहरू द्वारा क्षतिपूर्ति कार्यहरू ध्यानमा राख्नु पर्दछ।
इन्भेन्टरी र गोपनीयता नीति
पर्यवेक्षकबाट त्यस्तो टाढाको परिणाम वा उपायहरू रोक्नको लागि, तपाईंको कम्पनी वा संस्थाहरूको लागि GDPR अनुपालन गर्नको लागि गोपनीयता नीति हुनु महत्त्वपूर्ण छ। गोपनीयता नीति कम्पाइल गर्नु अघि, इन्वेंटरी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तपाईंको कम्पनी वा संस्था गोपनीयताको सन्दर्भमा कसरी गरिरहेको छ। त्यसकारण Law & More निम्न चरणबद्ध चरण योजना बनाइएको छ:
• चरण 1: तपाईले कुन व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्नुहुन्छ पहिचान गर्नुहोस्
• चरण 2: डाटा प्रोसेसिंगको लागि उद्देश्य र आधार निर्धारण गर्नुहोस्
• चरण 3: डाटा विषयहरूको अधिकार कसरी ग्यारेन्टी गरिएको छ निर्धारण गर्नुहोस्
• चरण 4: कि भनेर मूल्यांकन गर्नुहोस् र कसरी तपाईं अनुरोध, प्राप्त र रजिस्टर अनुमति
• चरण 5: निर्धारण गर्नुहोस् कि तपाईं डाटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन निर्धारण गर्न बाध्य हुनुहुन्छ
• चरण 6: डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त गर्ने कि नगर्ने
• चरण 7: तपाईंको कम्पनीले डाटा लीक र रिपोर्टिंग बाध्यतासँग कसरी व्यवहार गर्छ भनेर निर्धारण गर्नुहोस्
• चरण 8: तपाइँको प्रोसेसर सम्झौता जाँच गर्नुहोस्
• चरण 9: तपाइँको संगठन अन्तर्गत कुन सुपरवाइजरको अधीनमा पर्दछ निर्धारण गर्नुहोस्
जब तपाईले यो विश्लेषण गर्नुभयो, यो निश्चित गर्न सम्भव छ कि तपाईको कम्पनी भित्र गोपनीयता कानूनको उल्लंघन हुने जोखिम उठ्न सक्छ। यो तपाइँको गोपनीयता नीति मा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। के तपाइँ यस प्रक्रियामा समर्थन खोज्दै हुनुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। हाम्रो वकिलहरु गोपनीयता कानून को क्षेत्र मा विशेषज्ञ छन् र तपाइँको कम्पनी वा संस्था निम्न सेवाहरु संग मद्दत गर्न सक्छ:
Your तपाईको कानूनी प्रश्नहरुलाई सल्लाह दिँदै र जवाफ दिदै: उदाहरणका लागि जब त्यहाँ कुनै डाटा उल्लंघन हुन्छ र तपाई यससँग कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ?
The GDPR को लक्ष्य र सिद्धान्तको आधारमा तपाईंको डाटा प्रसंस्करणको विश्लेषण र विशिष्ट जोखिमहरू निर्धारण गर्ने: के तपाईंको कम्पनी वा संस्था GDPR लाई मन्जूरी गर्दछ र तपाईंले अझै कस्ता कानुनी उपायहरू लिन आवश्यक छ?
Documents तयारी र कागजात समीक्षा, जस्तै तपाईंको गोपनीयता नीति वा प्रोसेसर सम्झौता।
Data डाटा संरक्षण प्रभाव आकलनहरू सञ्चालन गर्दै।
Legal एपीद्वारा कानूनी कार्यवाही र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहयोग।
हाम्रो वर्तमान समाजमा गोपनीयता अधिकारहरूको संरक्षण बढ्दो हुन्छ। यो ठूलो अंशको लागि डिजिटलीकरणमा श्रेय दिन सकिन्छ, एक विकास जसमा जानकारी अधिक डिजिटल डाटाबेसमा प्रशोधन गरिन्छ। दुर्भाग्यवश, डिजिटलीकरणले पनि जोखिम समाहित गर्दछ। हाम्रो गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्नको लागि, गोपनीयता नियमहरू स्थापना गरियो।
Moment यस समयमा, गोपनीयता कानूनले GDPR को कार्यान्वयनबाट आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई पार गर्दछ। GDPR को स्थापनाको साथ, सम्पूर्ण यूरोपीय संघ एकै गोपनीयता कानूनको अधीनमा हुनेछ। यसले उद्यमहरूलाई ठूलो असर गर्छ, किनकि उनीहरूले डेटा संरक्षणको बारेमा कडा आवश्यकताहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ। GDPR ले डाटा विषयहरूको स्थिति बढाउँदछ तिनीहरूलाई नयाँ अधिकार प्रदान गरेर र उनीहरूको स्थापित अधिकारहरूलाई सुदृढ पार्दै। यसबाहेक, व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गर्ने संगठनहरूको बढी दायित्व हुनेछ। निगमहरूले यो परिवर्तनको लागि तयारी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि GDPR सँग अनुपालन नहुने दण्डहरू पनि कडा हुनेछन्।
के तपाईलाई जीडीपीआरमा संक्रमणका बारे सल्लाह चाहिएको छ? के तपाईं कम्पनियन्स जाँच गरिएको छ, तपाईंको कम्पनीले GDPR बाट प्राप्त गरेको आवश्यकताहरूको अनुपालन गर्छ भनेर निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ? वा तपाई आफ्नो व्यक्तिगत डेटा को संरक्षण अपर्याप्त छ चिन्तित हुनुहुन्छ? Law & More गोपनीयता कानूनको बारेमा विस्तृत ज्ञान छ र तपाइँलाई तपाइँको संगठनलाई GDPR अनुरूप भएको तरिकाले संरचना गर्न मद्दत गर्दछ।
हामीलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्नुहोस् +१ ((०) 31०040 369 ०० स्टुउर ईन ई मेल मेल: